Vaovao - Inona avy ireo tombontsoa azo avy amin'ny rafitra fanamoriana valve variable?
valizy maotera ho an'ny motera amerikanina
valizy maotera ho an'ny Cummins
valizy maotera ho an'ny Caterpillar
valizy maotera ho an'i john deere
valizy maotera ho an'ny Detroit
valizy maotera ho an'ny motera Alemana
valizy maotera ho an'ny Mercedes Benz
Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny rafitra fanovana valva miovaova?
Hatramin'ny nivoahan'ny motera dia tsy nitsahatra ny nanatsara azy ny olona, ​​ary nahita motera vaovao ihany koa izahay izay misy famindran-toerana isan-karazany manomboka amin'ny lehibe ka hatramin'ny kely. Miaraka amin'ny fitomboan'ny fiara dia nitondra krizy mahery vaika izahay. , Ny solika, loharanom-pahalalana tsy azo havaozina, dia reraky ny fitrandrahana isan'andro. Amin'ny maha-mpiara-belona antsika dia tsy mihevitra olana ara-angovo izahay na mitahiry loharano sasany ho an'ny taranaka ho avy. Miaraka amin'ny ezaky ny injeniera dia namolavola karazana maotera mpamonjy angovo vaovao izahay ary nitondra teknolojia fitsitsiana solika bebe kokoa. ankehitriny mpamatsy valizy maotera fiara dia hizara aminao ny tombotsoan'ny rafitra fanamoriana valva miovaova.
Ho fanampin'ny throttle sy turbine (na fiakarana mekanika), ireo singa izay misy fiatraikany amin'ny rivotra ao anaty varingarina dia misy valves.
Amin'ny ankapobeny, ny valizy miovaova dia misy karazany miovaova isan-karazany: fotoana miovaova amin'ny lafiny fidirana, fiakarana miovaova amin'ny lafiny fidirana, fotoana miovaova amin'ny sisin'ny fandaniam-potoana, ary fiakarana miovaova amin'ny lafiny fivoahana. Ny maotera sasany dia tsy manana afa-tsy iray amin'izy ireo, ary ny motera sasany dia manana maro amin'izy ireo amin'ny fotoana iray. Noho izany, ny haitao "miovaova" ny motera isan-karazany dia tsy voatery hitovy amin'ny firafitra.
Ny fitsipiky ny vanim-potoanan'ny valizy miovaova
Ny fitsipiky ny maotera misy lasantsy efatra izay mahazatra antsika. Ireo kapoka efatra miasa amin'ny suction, tsindry, asa, fandroahana, ary ny asan'ny tsingerina mitohy misy ny motera dia misy akony tsy azo sarahina amin'ny fotoana fanokafana sy famaranana ny famaranana. Fantatry ny rehetra fa ny valizy dia entin'ny crankshaft an'ny motera amin'ny alàlan'ny camshaft, ary ny fe-potoana valva dia miankina amin'ny zoro fihodinan'ny camshaft. Amin'ny motera tsotra dia raikitra ny fotoana fanokafana sy ny fanidiana ny valizy fidirana sy ny valin'ny setroka. Ity fotoana voafetra ity dia sarotra ny mandray ny fepetra takian'ny motera amin'ny hafainganam-pandeha hafa. Tianay ny hahatonga ny motera hahatratra ny fahombiazany avo kokoa Matetika izahay manova ny zoro α fironana amin'ny camshaft hanova ny fotoana fanokafana sy ny famaranana ny throttle mba hahatratrarana ny fotoana fiasana haingana indrindra hiteraka angovo kinetika lehibe kokoa. Ankehitriny dia manana fotoana valizy miovaova isika mba hamahana izany mora kokoa. Teknolojia.
Ny teknolojia fanamoriana valva dia rafitra tsotra sy rafitra rafitra mora vidy ao amin'ny teknolojia fanovana valva miovaova iray manontolo. Mampiasa mekanika fandefasana hydraulic sy gear izy io mba hanitsiana ny fotoana famaranana amin'ny valiny mifanaraka amin'ny filan'ny motera. Ny fanamoriana valva miovaova dia tsy afaka manova ny faharetan'ny fanokafana valva, fa afaka mifehy fotsiny ny fotoana fanokafana na fanidiana ny valva mialoha. Mandritra izany fotoana izany dia tsy voafehiny ny valizy fanokafana valizy toy ny camshaft miovaova, noho izany dia misy fiatraikany voafetra amin'ny fanatsarana ny fahombiazan'ny motera.
Mikasika ny fe-potoana misy valiny miovaova dia misy mitarika ny motera HONDA. Rehefa mandeha amin'ny milina ambany ny motera dia eo amin'ny toerana voalohany ilay pistona kely ary misaraka ny sandry telo rocker. Ny cam lehibe sy ny cam faharoa dia manosika ny sandry rocker lehibe sy ny sandry rocker faharoa. Fehezo ny fanokafana sy ny fanidiana ny valves fidirana roa, kely kokoa ny fantsom-bitsika, toy ny motera tsotra ny zava-misy. Na dia manosika ny sandry rocker afovoany aza ny cam afovoany, satria misaraka ny sandry rocker dia tsy voafehin'izany ny sandry roa hafa, ka tsy ho voakasik'izany ny fisokafana sy ny fikatonan'ny valva.
Fa rehefa mahatratra haingam-pandeha voafaritra ny motera (ohatra, rehefa mahatratra 5500 rpm ny fiara fanatanjahan-tena Honda S2000 amin'ny 3500 rpm), ny solosaina dia hanome torolàlana ny valizy solenoid hampavitrika ny rafitra hydraulic ary hanery ny piston kely amin'ny sandry rocker ho ataovy mihidy anaty vatana iray ireo sandry rocker telo ary atosiky ny cam eo afovoany miaraka. Satria ny cam afovoany dia avo noho ny cams hafa ary manana fiakarana lehibe kokoa. Valin'ny motera misy ny fiara dia lava ary mitombo koa ny fiakarana. Rehefa milatsaka amin'ny hafainganam-pandeha ambany ny hafainganam-pandehan'ny motera dia mihena ihany koa ny tsindry hydraulic amin'ny sandry rocker, miverina amin'ny toerany tany am-boalohany ny piston eo ambanin'ny asan'ny lohataona miverina, ary misaraka ny sandry telo.
Amin'izany fomba izany dia azonao atao ny mifehy ny fanjifana solika amin'ny hafainganam-pandeha ambany, ary miaraka amin'izay dia mifanaraka amin'ny zavatra ilainao amin'ny famoahana herinaratra rehefa mandeha haingana ny motera. Ny rafitra VTEC iray manontolo dia fehezin'ny solo-sainan'ny motera (ECU). Ny ECU dia mandray sy manodina ny masontsivana amin'ireo sakan'ny motera (ao anatin'izany ny hafainganam-pandeha, ny tsindry fidirana, ny hafainganan'ny fiara, ny mari-pana amin'ny rano, sns.), Ny fambara fanaraha-maso mifanaraka amin'izany ary ny fanitsiana ny rafitra hydraulic piston rocker amin'ny valves solenoid Ka ny motera dia fehezin'ny cam isan-karazany amin'ny hafainganam-pandeha hafa, izay misy fiatraikany amin'ny fanokafana sy ny ora ny valizy miditra. Mba hamokarana ny fivoahan'ny herinaratra antenainao indrindra hahazoana.
Fotoana fandefasana: Jan-28-2021
Wuji Country, Shijiazhuang City, Provinsi Hebei, Sina
valizy maotera ho an'ny motera japoney
valizy maotera ho an'ny motera Koreana
Jan-28-2021 Inona ny antony mahatonga ny valin'ny valizy maotera?
Jan-28-2021 Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny rafitra fanovana valva miovaova?
Jan-28-2021 Ahoana ny fomba hiatrehana ny tsy fahombiazan'ny valva?
Jan-28-2021 Ahoana ny fanarenana ny valin'ny motera fiara?